Kune avo vari kutsvaga bhuku reakateedzana Kadin (Mukadzi kana Simba reMukadzi) | Zvazvino Zvinyorwa
Zvazvino Zvinyorwa | | Mabhuku, dzakawanda
Kadin, inozivikanwawo munyika dzakasiyana se Mukadzi, Mukadzi Simba yakavakirwa pane zvakateedzana Mukadzi, hupenyu hwangu kuvana vangu naJuji Sakamoto. Kwave kuri kubudirira kwenyika dzese, kutepfenyurwa munyika makumi matanhatu nenomwe.
Chinhu chinogadziriswa chatakamboona kwenguva yakati rebei ndechekutengeswa kwemabhuku kubva munhevedzano uye mafirimu akakurisa. Dzimwe nguva iwo ari enganonyorwa ayo avakange vakavakirwa uye pane vamwe iwo ari mabhuku anoburitswa mushure meTerevhizheni kana bhaisikopo kubudirira. Zviuru zvevanhu vanoda kuverenga bhuku nezve dzakateedzana dzavakada.
Isu takaona izvi nguva pfupi yadarika kune vane mwero Castamar kana nevakabudirira Mutambo waMatombo.
Saka nyaya yeMukadzi (Kadin) inonyanya kuda kuziva, nekuti nhevedzano inoguma naBahar achiburitsa bhuku rakabudirira nezve hupenyu hwake. Bhuku rinonyatsotaura zvatakaona mune akateedzana.
Uye zvinosuruvarisa kuti imi mose mumboshamisika, iro bhuku chairo ravangangodaro vari kutengesa harisi kunyatsovapo Iko hakuna rakaburitswa bhuku pane akateedzana, kunyangwe aine zvese kuti abudirire.
1 Series plot (ine vapambi)
3 The Serie
3.1 Vatambi vakuru
Series plot (ine vapambi)
Bahar Sismeli, ndiamai, akafirwa, nevana vaviri vanoenda kune imwe yenzvimbo dzine hurombo muTurkey, uye anotambura nechirwere chakakomba. Akasiiwa naamai vake achiri mudiki uye
Kubva pano tichaona hupenyu hwake hwezuva nezuva uye zvibayiro zvaanoitira vana vake izvo zvinozomutungamira kune zvakanyanyisa uye zvisingaite mamiriro ezvinhu, ayo anosanganisa mutambo chaiwo pamwe nekubata kwekuseka.
Kudzoka kwemurume wake, uyo waakatenda akafa, uye akaroora ane vana vaviri. Sei, asingazivi, anopinda mumigwagwa yemapoka akasiyana e gangster, akasimba uye akasimba. Kuyanana naamai vake, uye chimiro chehanzvadzi yake, Sirin, anova iye akaipa zvakanyanya uye ndiye anokonzeresa matambudziko ese muhupenyu hwake.
Bahar, achadanana nevarume vakati wandei, acharasikirwa, achaumba zvakare mhuri yakakomberedzwa neshamwari shoma dzinoenda naye mune zvese zviitiko, uye mumamiriro ake akaipisisa uye anozopedzisira ave munhu akabudirira nekuburitswa kwebhuku bhuku nezve hupenyu hwake.
Bhuku iro zvinosuruvarisa kuti isu hatigone kuwana, kunyangwe isu tichigona kuriona mushanduro yaro yepanyama munhevedzano
Pfungwa dzakasiyana dzinodzora chiito chose. Chinonyanya kukosha, kupihwa simba kwevakadzi, kunyanya munyika yakaita seTurkey uko machismo aripo zvakanyanya kupfuura kune dzimwe nyika dzekumadokero. Nyaya yaBahar ndeye yemukadzi anoenda kumberi kwake ega, kunyangwe zvese zviteyeso nemanomano avakamuisira, zvakazvimiririra. Zvakare muzvitsauko zvakawanda tinoona mareferenzi achipesana nekushungurudzwa, uye mukuda kwekuenzana nerusununguko.
Handidi kuti vana vangu vakure vachiona murume achirova vakadzi nechikonzero chipi zvacho, handidi kuti varume varove vakadzi nechikonzero chipi zvacho
Ndiyo yakanyanya kutariswa yeTurkey akateedzana pasirese, yakatepfenyurwa munyika makumi matanhatu nenomwe. Yakaumbwa nemwaka mitatu nezvikamu makumi masere nemasere, ndiyo yakahwina muTokyo Drama Awards muna 65. Sezvatakambotaura, zvinoenderana neimwe nhevedzano, Mukadzi na Yuji Sakamoto
Gezge Özpirinçci saBahar Çesmeli (protagonist mukuru)
Seray Kaya saŞirin Sarıkadı (hanzvadzi yaamai vaBahar uye baddi, dhimoni)
Kubra Suzgun saNisani Çesmeli (mwanasikana wedangwe waBahar)
Ali Semi Sefil saDoruk Çesmeli (mwanakomana wekupedzisira waBahar)
Feyyaz Duman saArif Kara (muridzi wemba uye achidanana naBahar, anozopedzisira ave mumwe wake)
Serif Erol saEnver Sarikadi (baba vokurera vaBahar nababa vaSirin)
Gökçe Eyüboglu saCeyda (shamwari yepedyo yaBahar uyo achamuperekedza munhevedzano)
Bennu Yildirimlar saHatice Sarikadi (amai vaBahar)
Caner Cindoruk saSarp Çesmeli (murume waBahar)
Icho chikamu chakakosha kwazvo pane akateedzana. Nemimhanzi ine simba uye inonyatso kuzivikanwa ivo vanokwanisa kutipa mamiriro. Pakarepo unoziva kana nhamo kana mamiriro enyaya achizoitika, zvinongova zvinyorwa zviviri iwe unozviisa iwe mukukakavara. Vagadziri veizvi vari Cem Tuncer uye Ercüment Orkut, vaviri vevanyori vakanakisa muTurkey.
Hunhu hwega hwega hunofambidzana nenziyo dzakasiyana dzezviitiko zvaano nyeredzi. Kana iwe ukawira murudo, iwe unogona kuwana rwiyo rwayo pano.
Isu Tichave takateerera kukuzivisa iwe kana vakaiburitsa. Uye kana iwe uchifarira kuti isu titaure nezve enganonyorwa ayo ako aunofarira akateedzana akavakirwa, tisiye isu mhinduro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Bhuku reKadin akateedzana, anozivikanwa seMukadzi kana Simba reMukadzi